Siyaasi Soomaali ah oo lagala laabtay dhalashada Sweden | KEYDMEDIA ONLINE
Siyaasi Soomaali ah oo lagala laabtay dhalashada Sweden
Madaxii hore ee iskuul Islaami ah oo ku yaalla dalka Sweden ayaa lagu eedeeyay inuu musuq maasuqay malaayiin lacagta Swedishka ah, isla-markaana uu qeyb ka mid ah lacagtaas ku maalgaliyay Ururro iyo kooxo siyaasadeed oo ka jira Soomaaliya.
SWEDEN - Hoggaamiyaha Xisbiga Midnimo Qaran [National Unity Party] Cabdirisaaq Waabari, oo horay u ahaa xildhibaan ka tirsan xisbiga Moderaterna ee Sweden, soona noqday madaxii Iskuulka Muslimiinta ee Romosse School ee magaalada Göteborg, ayaa lagu eedeeyay inuu khiyaameeyay lacag dhan 13 milyan oo lacagta Swedish-ka ah, taas oo u dhiganta (£1.1 million lacagta Ingiriiska, ama $1.5 million doollarka Mareykanka).
Baaritaannada ka dhanka ah dambiyada maaliyadeed ee lagu sameeyay Waabari, ayaa horseeday, in laga wareego baasaboorkiisa Sweden, halka uu ka cabsi qabo ka masaafurinta dalka iyo dib ugu celinta Soomaaliya, sida uu qoray wargeyska Aftonbladet.
Baaritaanno lagu sameeyay dhaq-dhaqaaqa maaliyadeed ee Waaberi, ayaa lagu ogaaday in uu lacag kaash ah [Cash] u diray dad kala duwan oo Soomaaliya jooga, halkii ay ahayd in qarashkaas loo adeegsado dhanka waxbarashada iyo howlaha bini’aadannimada.
"Saddex iyo toban milyan oo karoon oo ka mid ah deeqaha dawladda hoose ee loogu talagalay hawlaha dugsiga ayaa ku lumay waxyaabo kale," dacwad-oogaha Henric Fagher ayaa u sheegay warbaahinta.
Cabdirisaaq Waaberi, waa siyaasi Soomaali-Swedish ah oo ka tirsan xisbiga Moderaterna, wuxuu xubin ka ahaa baarlamaanka Iswiidhan intii u dhaxeysay 2010 ilaa 2014, isagoo matalaya Göteborg.
Tan iyo 2017, Waaberi waa Hoggaamiyaha Xisbiga Midnimo Qaran ee Soomaaliya, kaas oo akoonadiisa ay ku dhacday lacagta ugu badan ee loo heysto Waabari. Xisbigiisu, wuxuu si weyn kaga soo jeedaa gacan ka hadalka DF iyo Kooxda Al-Shabaab, wuxuuna dood ka qabaa qodobbo ka mid ah dastuurka Soomaaliya.
Eedeynta wax-is-daba-marineed ayaa kusoo beegmaysa dhowr bilood ka dib markii Waaberi laga ceyriyay xilkii madaxa Iskuulka Römosse bishii June ee sanadkan, markaas oo ay soo baxeen eedeymaha la xiriira lunsiga lacagta.
Waaberi, dhankiisa wuxuu eedadahaas hore ugu tilmaamay, beegsi isaga ka dhan ah, oo isir takoor iyo sumcad dil salka ku haya.